ग्राहकको कला प्रेममा खस्दै | Martech Zone
हिजो, काम गर्ने बाटोमा, म सुन्दै थिए डेभ रैमसे जो बीम, को लेखकसँग कुरा गर्नुहोस् प्रेममा झर्ने कला। जोले भने कि त्यहाँ प्रेममा पस्नका लागि key प्रमुख तत्वहरू थिए ... प्रतिबद्धता, आत्मीयता र जोश। कुराकानी साँच्चिकै मसँग अड्कियो - यति धेरै कि मैले पछि पोष्ट लेख्न के सुनें भनेर एक भ्वाइस मेमो बनाए।
मैले यसलाई राइट अन इन्टर्एक्टिवका सह-संस्थापक र सीईओ ट्रोय बर्कसँग पनि छलफल गरिरहेको थिएँ। Troy को बारे मा भावुक छ मार्केटिंग स्वचालन तर उद्योग मा धेरै संग असहमत हुन्छ कि मार्केटिंग अटोमेसन को रूप मा आफ्नो नेतृत्व उत्पादन प्रणाली भेस। उनको विश्वास छ कि हुर्काउने सम्भावना र संचार तपाईको हालको ग्राहकहरुसंग बढि रहेको छ तपाईको ब्रान्डमा प्रतिबद्ध नभएको नेतृत्वको तुलनामा। वाह।
प्रतिबद्धता, आत्मीयता र जोश
प्रतिबद्धता - ग्राहकहरु तपाइँको उत्पादनहरु र सेवाहरु को लागी तपाइँको कम्पनी मा एक वित्तीय लगानी बनाउने छन्। यसले सँधै मलाई चकित पार्दछ कि कति कम्पनीहरु पैसा प्रति बढी प्रतिबद्ध छन् कि तिनीहरुका ग्राहकहरु उनीहरु लाई ग्राहकहरु लाई भन्दा उनीहरु लाई ल्याउन। यदि तपाईंले डेलिभर गर्नुभयो अनुबन्ध अनुसार तर तपाइँको ग्राहक सफल छैन, तपाइँ दुबै हराउनुहुन्छ। तपाईं हाम्रो ग्राहकहरूको सफलता प्रतिबद्ध हुन आवश्यक छ, आवश्यक वित्तको पर्वाह नगरी। तपाईंको ग्राहकहरू तपाईंको सफलताको लागि प्रतिबद्ध हुनु आवश्यक छ, यो सुनिश्चित गर्दै कि वित्तीय पनि आउँदैन। हामी ग्राहकहरु संग धन्यबाद छौं जसले हामीलाई प्रतिबद्ध छ र यसको विपरित छ।
अंतरिमता - व्यक्तिगत स्नेह को लागी आत्मीयता गल्ती नगर्नुहोस्। घनिष्टता पनि तपाइँको ग्राहकहरु लाई बुझ्न को लागी लिदैछ र तिनीहरु लाई तपाईलाई बुझ्न को लागी। हामी हाम्रा कमजोरीहरू हाम्रा ग्राहकहरूसँग साझेदारी गर्दछौं, उनीहरूको कमजोरीहरू के हुन् सिक्नुहोस्, र हामी दुबै कभर गरिएको छ भन्ने कुराको सुनिश्चित गर्न हामीले योजना बनाएको सुनिश्चित गर्दछौं। हामी हाम्रो ग्राहकहरूको बारेमा सकेसम्म धेरै जान्न सक्छौं र तिनीहरूलाई हाम्रो करारहरू भन्दा टाढा साझेदारी गर्दछौं। हामी हाम्रो जडानहरूमा उनीहरूलाई परिचय दिन्छौं, हामी तिनीहरूलाई अन्य स्रोतहरू भेट्टाउँदछौं, हामी तिनीहरूलाई सिफारिश गर्दछौं अन-लाइन। हामी कम्पनीहरूसँग सम्झौतामा हस्ताक्षर पनि गर्दैनौं यदि हामी उनीहरूका उत्पादनहरू प्रयोग गर्दछौं जहाँ सम्भव हुन्छ। हामी उनीहरूलाई यत्ति राम्ररी जान्न प्रयास गर्दछौं कि हामी उनीहरूको उत्पादनहरू प्रभावकारी रूपमा बेच्न सक्छौं।
आवेग - एक कम्पनी जुन हामीले कुरा गर्यौं र संगै संघर्ष गरिरहेको छ। हामीले तिनीहरूलाई कसरी मद्दत गर्न सक्दछौं भनेर पत्ता लगाउने प्रयास गर्दा (तिनीहरू ग्राहक छैनन्), तपाईंले फेला पार्न सक्नुहुन्न एकल आफ्नो स्टाफमा व्यक्ति जुनको बारेमा भावुक छ तिनीहरु के गर्छन। तिनीहरूले वेबिनारहरू र घटनाहरूको लागि उनीहरूसँग सामेल हुन यहाँ र त्यहाँ अन्य प्रख्यात प्रवक्ताहरू भाडामा लिएका छन् ... तर ती प्रवक्ताहरूले वास्तवमा प्रयोग गर्दैनन्। को उत्पादन कसरी तिनीहरू भावुक हुन सक्छन् यदि तिनीहरूले उत्पादन को उपयोग गर्न प्रतिबद्ध छैन? तल रेखा त्यो हो कि तिनीहरूले सक्दैनन्। किन उनीहरू संघर्ष गरिरहेका छन्।
के तपाईं आफ्नो ग्राहकहरु प्रति प्रतिबद्ध हुनुहुन्छ? के तपाईं उनीहरूसँग घनिष्ठ हुनुहुन्छ, तिनीहरूको उद्योग, तिनीहरूको स्थिति, र तिनीहरूको चुनौतीहरू? के तपाई तिनीहरूको उत्पादन वा सेवाहरु बारे भावुक हुनुहुन्छ? यदि तपाइँ यी मध्ये कुनै पनि उत्तरको जवाफ दिनुहुन्न भने, कहिले पनि एक अर्काको प्रेममा पर्नु हुँदैन। हामी हाम्रो ग्राहकहरु लाई माया गर्छौं र गर्व छ कि हाम्रो ग्राहकहरु हामीलाई फिर्ता माया गर्छन्। यो सँधै त्यस्तो भएको छैन, तर उनीहरूसँगको हाम्रो सम्बन्ध फूल्न जारी छ।
अन्तिम कुरा ... किनकि हामी आफूले माया गरेको कुरा गरिरहेछौं, यो वास्तवमै काम गर्दैन। त्यो हुनको लागि एक अविश्वसनीय ठाउँ हो!
टैग: ग्राहक प्रेमप्रतिबद्धताग्राहक प्रेमअंतरिमताआवेग